आहा ! अन्जु पन्त यसरी छमछमि नाच्दै (हेर्नुस् भिडियो ) - Public 24Khabar
Home News आहा ! अन्जु पन्त यसरी छमछमि नाच्दै (हेर्नुस् भिडियो )
आहा ! अन्जु पन्त यसरी छमछमि नाच्दै (हेर्नुस् भिडियो )
चर्चित गायिका अञ्जु पन्त वैवाहिक जीवनमा बाँधिएसगै चर्चा सकिएको छ । अञ्जु पन्तले थीर कोइरालासँग विवाह गर्न गरेकि हुन् ।
तपाईंलाई जानकारी गराउ कि यो उनको दोस्रो विवाह हो । उनले छोरी परितोशिकाको अनुरोधका कारण विवाह गर्न लागेको स्रोतको दावी गर्दै आएको छ । परितोशिकाले केही अन्तरवार्ताहरुमा आफुले आमालाई दोस्रो विहेका लागि अनुरोध गरेको कुरा बताउँदै आएकी थिइन् ।
गायिका पन्तले यसअघि गायक मनोजराज सँगको वैवाहिक जीवन कानूनी रूपमा टुङ्ग्याएकी थिइन् । यद्यपि गायिका पन्त स्वयंमले आफ्नो विवाहका बारेमा भने पछिल्लो केही समय अवदिभरि केही पनि बताएकी थिइनन्
Previous articleExclusive: कुलमानलाई मु*द्धा परेपछि युवाहरु पुगे कार्यकक्षमै ! अब प्रधानमन्त्री बन्नुस हामि साथमा छौ, भिडियो हेर्नुहोस (सेयर गराै)
Next articleदुबै हात के भयो यस्तो , आसु पुछ्न समेत हात छैन ,कठै (हेर्नुस् भिडियो ) सहयोग काे लागि सेयर गराै